Sophos weputara XGS Series Firewall Appliances Iji Na-enwe Ọganihu Na-emegide Cyberattacks
Nchọpụta Ọhụrụ Na-achọpụta Ọganihu na Cybercriminals na-eji TLS iji mepụta mwakpo, agbanyeghị, XGS Series Firewall Appliances na-abịa na Nnyocha Industrylọ Ọrụ-Layer Security Layer (TLS)
Sophos, onye ndu ndu uwa nile nke cybersecurity na-esote, taa ekpughere ohuru XGS Usoro firewall ngwa site na arụmọrụ na-enweghị atụ na nchebe dị elu megide cyberattacks.
Ngwa oru ohuru na - achoputa ulo oru kachasi mma nke kachasi njem njem (TLS), tinyere nkwado nke ndi TLS 1.3, nke ruru uzo ise karia udiri ndi ozo di na ahia taa.
Dan Schiappa, onye isi ndi ahia na Sophos, kwuru, “Sophos Firewall XGS Series ngwa na-anọchite anya ngwaike ngwaike kachasị dị mkpa nke anyị weputara ma webata nchọpụta na-enweghị atụ, nchedo na ọsọ.
“Ndị otu nchekwa enweghịzi ike ileghara anya n'okporo ụzọ ezoro ezo n'ihi ụjọ ịmebisị ihe ma ọ bụ imejọ ọrụ - enwere ọtụtụ ihe egwu. Anyị emegharịala kpamkpam Sophos Firewall ngwaike iji mee ka ịntanetị ezoro ezo nke oge a.
Ndị ọrụ nchekwa nwere ikike ugbu a inyocha okporo ụzọ ezoro ezo ma na-enwu gbaa n'ihe bụbu oghere ojii, ha nwekwara ike iji obi ike mee ya na-emebi ọrụ ha. ”
Ndị Cybercriminals na-arịwanye elu n'iji TLS zere nchọpụta
Sophos taa bipụtara nyocha ọhụụ, "Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Malware Malware Ugbu a Jiri TLS iji zoo Nkwukọrịta," na-achọpụta oke na cybercriminal na-eji TLS na mwakpo ha.
Ndị mmegide na-eji aghụghọ na-ewu ewu na-ezo ezo ma na-ekpuchi ọdịnaya nke nkwukọrịta ọjọọ iji zere nchọpụta ka ha na-eme mwakpo.
N'ezie, 45% nke malware achọpụtara site na Sophos site na Jenụwarị ruo Machị 2021 jiri TLS zoo nkwukọrịta ọjọọ.
Nke ahụ bụ ịma jijiji ịrị elu site na 23% Sophos kọrọ na mbido 2020. Sophos ahụwokwa mmụba na ojiji nke TLS iji mepụta mwakpo ransomware na afọ gara aga, ọkachasị site na iji aka gbapụta ransomware.
Ihe ka ọtụtụ okporo ụzọ TLS dị njọ nke Sophos chọpụtara achọpụta gụnyere malware mbibi mbụ, dị ka ndị na-ebu ibu, ndị na-atụda akwụkwọ na ndị nrụnye akwụkwọ dịka BazarLoader, GoDrop na ZLoader.
“TLS doro anya agbanweela nzuzo nke nkwukọrịta ịntanetị ka mma, mana maka ihe ọma niile ọ mere, ọ mekwara ka ọ dịkwuo mfe maka ndị mwakpo ibudata ma wụnye modulu ọjọọ ma wepu data ezuru - n'okpuru imi nke ndị ọrụ nchekwa IT na ọtụtụ teknụzụ nchebe, ” Schiappa kwuru.
“Ndị na-awakpo anyị na-eji uru weebụ na ọrụ igwe ojii na-echebe TLS maka nnyefe malware na maka iwu na njikwa. Ihe mbụ ha mere bụ malware nke mbụ maka mbuso agha dị egwu, ebe ha na-ehibe ụlọikwuu maka nnukwu ogbunigwe nke na-eso, dị ka ransomware. ”
Accelerating Iyi Egwu Nchedo
Kwadoro site na ụlọ ọrụ Xpho nke Sophos Firewall, XGS Series na-ewepụta usoro iyi egwu kachasị mma nke ụlọ ọrụ ahụ, na-achọpụta ma kwụsị ihe egwu kachasị ama mara - gụnyere ransomware.
Nchedo na-eme ka ọgụgụ isi iyi egwu dị egwu, dị naanị site na SophosLabs Intelix ma dabere na petabytes nke Uzoamaka data iyi egwu.
A na-ekpochapụ faịlụ ndị na-enyo enyo na gburugburu ebe obibi SophosLabs Intelix dị ka nke ọma yana edobe nyocha miri emi maka nyocha mkpuchi ọzọ na nchịkọta ọgụgụ isi.
New Xstream flow processors n'ime ngwa na-akpaghị aka na-eme ka okporo ụzọ a tụkwasịrị obi, dị ka ngwanrọ dị ka ọrụ (SaaS), ngwanrọ akọwapụtara na ngwanrọ (SD-WAN) na ngwa igwe ojii, na-enye isi ụlọ maka okporo ụzọ chọrọ TLS na nyocha ngwugwu miri emi.
Nke a na-ebelata umengwụ ma melite arụmọrụ zuru oke maka ngwa azụmaahịa dị mkpa, ọkachasị ndị na-eji data oge.
Ndị nhazi Xstream na-arụ ọrụ sọftụwia, na-enye Sophos ohere iwepụ okporo ụzọ ndị ọzọ n'ọdịnihu. Ike mgbanwe iji bulie ma mekwaa njikọta na akụrụngwa n'onwe ya na-echekwa ngwa ahịa ngwaike ndị ahịa.
Sophos na-enye ọhụhụ dashboard pụrụ iche na nke kensinammuo nke okporo ụzọ TLS na nyocha, yana ndị nchịkwa nchekwa nwere ike itinye mgbakwunye maka iyi iyi nsogbu na otu ịpị. A na-ejikwa arụmọrụ buru ibu rụọ ọrụ site na igbe nwere ọtụtụ iwu nke emelitere ma kwadobe ya site na SophosLabs iji wepu okporo ụzọ dị mma na nyocha.
Sophos Firewall XGS Usoro ngwa na femụwe a na-achịkwa ha n'ụzọ dị mfe na igwe ojii Sophos Etiti n'elu ikpo okwu n'akụkụ pọtụfoliyo 'Pọtụfoliyo niile nke usoro nchekwa cybersecurity na-esote.
Ngwọta kesara ọgụgụ isi iyi egwu wee zaghachi na nchedo na akpaghị aka site na ụzọ nchekwa nchekwa mmekọrịta Sophos pụrụ iche.
Njikọ na Sophos Managed Threat Response (MTR) na-emekwu nchebe na nyocha mmadụ maka 24/7 jikwaa nchọpụta egwu na nzaghachi n'ụzọ zuru ezu.
Sophos Firewall XGS Series desktọọpụ na ọtụtụ ngwa 1 rackmount dị maka ịzụta ozugbo naanị site na ọwa ụwa zuru oke nke Sophos nke ndị mmekọ na ndị na-enye ọrụ njikwa (MSPs).
Modelsdị ndị a dabara adaba maka obere, ọkara na kesara dị ka otu nchekwa nchekwa netwọkụ niile nwere ọnụ ahịa siri ike maka arụmọrụ arụmọrụ yana nhọrọ njikọta dị iche iche.
Modelsdị ndị ọzọ emere maka gburugburu ụlọ ọrụ na-achọ nnweta kachasị maka nhazi netwọkụ mgbagwoju anya ga-adị na izu ndị na-abịanụ. Ikike ichotara ime ka enwee ikikere di nfe gunyere nkwado di nkpa.
Ihe ndị nyocha na ndị mmekọ Channel kwuru
Frank Dickson, osote onye isi oche mmemme na IDC kwuru, "Ngwaọrụ Firewall na-agbanwe iji nweta okwu ọhụụ, gụnyere igwe ojii na mgbanwe mberede na ndị ọrụ na-eto eto dịpụrụ adịpụ."
Ihe mara mma nke Sophos Firewall nke Xstream dual processor architecture obula bu ikike ya iji mee ka okporo uzo atukwasiri obi site na ihe anakpo 'elephant flows' - nnukwu uzo iyi mgbasa ozi, uzo VoIP na obula igwe ojii - ka oburu iji nweta ebumnuche zuru oke nke CPU iji mezuo ihe kwesiri ekwesi. usoro, dịka nyocha dị omimi na nyocha TLS.
Ihe si na ya pụta bụ ngwa ọrụ ntanetị nwere ike idozi iji chebe ya mgbe ọ na-ezukọ ma na-eme ngwa ahịa na-achọ ngwa ahịa dị iche iche. ”
“Igwe ọhụrụ firewall nke XGS Series ọhụrụ na-eti mkpu n’ike n’ike site na oke siri ike, nkwụsi ike enweghị ike imegide. Anyị weghaara mmụba nke arụmọrụ na-eme ka okpukpu abụọ anyị rụpụta, nke mebiri anyị kpamkpam.
Sophos Firewall abụwo ụlọ ọrụ kachasị mma, mana ngwa ọrụ XGS bụ ndị na-agbanwe agbanwe na ndị na-enweghị atụ ma e jiri ha tụnyere ihe ọhụrụ dị egwu nke gafere afọ ndị ọzọ maka onyinye ndị ọzọ, ” kwuru, sị Sam Heard, onye isi ala na Ọrụ Ndozi data.
“Sophos Firewall na-enye nchebe ndị ahịa anyị chọrọ ka ha na-emewanye ngwa ahịa dị oke mkpa na igwe ojii ma were teknụzụ ntụkwasị obi efu.
Ọ bụ mmeri maka ndị mmekọ ọwa, ndị na-eritekwu uru site na ohere nnabata dị ukwuu ịgafe na ire ere n'ofe dum nke usoro ngwọta na ọrụ Sophos. ”
Karen Greer, CEO na Secure Content Technologies, kwuru, sị, "Sophos na-ebuli elu ma na-ebugharị ụlọ ọrụ cybersecurity na-aga n'ihu ọsọ ọsọ na ngwa ọhụrụ XGS Series ya, nke na-enweghị ihe dị ịtụnanya,"
“Ngwunye ngwa ọrụ dị mfe nke ukwuu, n'ime nkeji ole na ole, apụrụ m ịnụ ka onye ọrụ anyị na-eti mkpu site na mgbidi, 'chaị, nke a bụ ngwa ngwa! A na-ejikwa Sophos Firewall gbalịsie ike na Sophos Central, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịnweta ma jikwaa gburugburu ndị ahịa dị iche iche ma dị mgbagwoju anya.
Knowingmara na Sophos Firewall na-akpaghị aka na -ekesa ọgụgụ isi iyi egwu yana ihe ngwọta ndị ọzọ n'elu ikpo okwu site na Sophos 'mekọrịta ihe nchebe obi bụ egwuregwu na-agbanwe agbanwe, na-enye anyị obi ike zuru oke na udo nke uche na echekwara ndị ahịa anyị - ọbụlagodi egwu kachasị egwu anaghị enwe ohere ka m na-agafe. ”
Featured Image: Dan Schiappa, Onye isi ahịa ndị isi na Sophos